Dzidziso dzisina musoro dzekuputswa kwekodzero | Linux Vakapindwa muropa
Indaneti, nharembozha, vezvenhau, uye yekugadzirisa software exponentially yakawedzera kupihwa kwemukati. Mune Nyaya yapfuura Isu takataura nezve kuoma kwepuratifomu yeTwitch yekubata iko kuwedzera kwezvichemo kubva kumakambani rekodhi.
Iko kudanwa kwemakambani ekurekodha kune rutsigiro rwepamutemo, kunyange hazvo kuchiri kuseka nekuti kushandiswa kwemimhanzi hakuitwe nekuda kwekutengesa, asi kune mamwe anoita zvisinganzwisisike.
1 Zvikuru zvisinganzwisisike zvekutyorwa kwekopiraiti
1.1 Usatarise chikafu
1.2 Apple rakarambidzwa
1.3 Iwe unozvitarisa uye haubate
1.4 Kuzivisa muridzi wepakutanga
Zvikuru zvisinganzwisisike zvekutyorwa kwekopiraiti
Pasina kupokana, chimwe chezvinhu zvisina musoro zvirevo zvinobva panguva yepamberi peinternet. VaMarx Brothers vakaronga kuburitsa bhaisikopo rinonzi Husiku muCasablanca. Makore apfuura, Warner Bros anga aburitsa firimu rayo rakakurumbira Casablanca uye achitenda kuti izvi zvaipa kodzero dzakakwana kushoko.. Iyi yaive mhinduro yaGroucho Marx.
Vanodiwa Warner Hama,
… Iwe unotora Casablanca yako uye unoti hapana mumwe munhu anogona kushandisa zita iro pasina mvumo. Zvakadii neWarner Hama? Ipfuma yako futi? Iwe unogona kunge une mvumo yekushandisa zita reWarner, asi ko hama? Nehunyanzvi, isu takanga tiri hama pamberi pako. Isu tanga tatoita kutenderera kwetsoka seMarx Brothers apo Vitaphone yaive ichiri nyore kupenya muziso remugadziri, uye kunyangwe pamberi pedu pakave nedzimwe hama ...
Ini ndinonzwa kuti zvese chikanganiso chebato rinotyisa uye rinosuwisa repamutemo rekambani, rinotongwa nevamwe veavo varume vane matambudziko echikoro, anokwira mudenga anoda mukurumbira nekuyemurwa, uye anodawo kuremekedza mitemo yechisikigo yekusimudzira.
Warner akazopedzisira arasa chikumbiro, asi, achitora mukana wekuti vanhu vazhinji havana nzira kana kuda kuita kumatare, madhipatimendi epamutemo anoramba achiita zvinhu zvavo mumazuva eInternet. Heano mimwe mienzaniso;
Kana vana amai vekare vakatitsiura pataitamba nechikafu, avo vari kuGerman vanofanirwa kuzviita kana vana vavo vatora mifananidzo yavo.
Mutemo wa2013 unosimbisa kuti kana iri chikafu chakanyatsoratidzwa, mubiki anoonekwa semusiki uye anofanirwa kukumbirwa mvumo yekuchiisa kunetiweki
Zvinotaridza kuti vabiki vakati wandei vakanyunyuta kuti vanhu vari kutora mifananidzo yechikafu chavo vari kuba njere dzeresitorendi.
Louis Rossman ndeye youtuber uyo pane chiteshi chake anodzidzisa vanhu maitiro ekugadzirisa yavo yavo Hardware. Rimwe zuva akange asina zano riri nani pane kuratidza vashandisi veMacBook maitiro ekuzviita.
Apple yakatumira Rossman tsamba yakazadzwa nekutyisidzirwa kwakafukidzwa, achimupomera kutyora kodzero yake nekutendera vanhu kuti vaone macomputer. Rossman akataura zvine mutsindo kuti Apple yakanga yatyisidzira kurwisa shopu yavaive nayo, voiisa kunze kwebhizinesi, ndokuvhara chiteshi chayo cheYouTube.
Kutenda kudzokero kwezvakataurwa naRossman A.pple akapedzisira adonhedza mari, asi vamwe vashambadzi vashoma havana kuita rombo rakanaka.
Iwe unozvitarisa uye haubate
Kana chinhu cheApple chichiita senge chiri kushungurudza, pedyo nemugadziri wetarakita John Deere, kambani yeManzanita ndiyo Free Software Foundation.
Matorakita ako matsva Vanouya nemakomputa akavakirwa-mukati ayo anotarisa injini, uye haaregi varidzi vazvigadzirise ivo pachavo. Makomputa ane dhijitari yekuvharira iyo inoda kuti iwe uise kiyi usati waita chero mhando yekugadzirisa, hongu pane nzira dzekupfuura nekiyi, asi kambani inofunga izvozvo kubiwa kwepfuma yehungwaru uye kutyisidzira nemadhora zviuru mazana mashanu zvemadhora uye makore mashanu mutirongo kune chero munhu anotsunga kugadzirisa tirakita asingadane basa rakabvumidzwa rehunyanzvi.
Kuzivisa muridzi wepakutanga
Mune chimwe chezvikamu zvekuratidzwa Baba vemhuri iIvo vaisanganisira vhidhiyo yeYouTube ine mavara aitaura pamusoro payo.
Asingagutsikane nekushandisa vhidhiyo pasina mvumo, Fox akamhan'arira kodzero dzekuputsa kodzero kumunhu akazvitumira pakutanga. Kunyangwe vhidhiyo yacho yakaiswa makore manomwe pamberi pechiitiko cheMhuri Guy, Fox akakwanisa kuitora ichibviswa.
Dzese idzi nyaya dzine hunhu. LIwo makambani anofungidzira kuti mumhan'ari haazoite. Kusvika pane izvi zvinogadzira imwe mhando yemhinduro, pamwe nekuzviita zveruzhinji kana nekushandisa sangano vanotsigira kodzero dzedhijitari, vangangodzokera kumashure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Dzidziso dzisina musoro dzekuputswa kwekodzero